I-Vionlabs yomhlaba eMelika ngokuqeshwa kukaKevin Odden | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » iindaba » I-Vionlabs yomhlaba kumazwe aseMelika ngokuqeshwa kukaKevin Odden
I-Vionlabs yomhlaba kumazwe aseMelika ngokuqeshwa kukaKevin Odden
IStockholm, eSweden, 08: 00 CET Okthobha 7th, 2019 - I-Vionlabs ibhengeza ukuba iyaqhubeka nokukhula kwayo ngokukhawuleza ngokuqeshwa kukaKevin Odden ukukhokela imisebenzi yayo yorhwebo eMelika. Inkampani iyakwandisa ibhodi yayo yeengcebiso ngokuqeshwa kuka-Anette Schaefer kunye noHanno Basse.
Iqonga leVionlabs libonelela ngotshintsho lwenyathelo ekufumaneni umxholo. Iplatifomu yokuFumanisa umxholo wayo ene-AI yenza iminwe eyahlukileyo kwisiqwengana ngasinye somxholo wevidiyo, owenziwe kwiqela lakhe lokuqala kunye nedatha yomntu wesithathu ekhokelayo. Idatha yeVionlabs yenziwa ngokuyinxalenye yinkqubo eyaphula umhlaba ebonisa imephu yolwazi lweemvakalelo phakathi kwezinto zomxholo, nokuba kungoku okanye ikhathalogu, kunye neziqendu ezizodwa.
Itekhnoloji ivumela abaqhubi ukuba banciphise ixesha abathengi abalichitha bekhangela umxholo, ukunciphisa i-churn kunye nokuphucula iindlela zeshishini eziphambili. Ikwabonelela abaqhubi ngamandla okufumana ukubaluleka okutsha kumxholo wekhathalogu umthengi anokuhlala engayihoyi. Iqonga lenze amatyala alo esidlangalaleni kumdlalo we-IBC2019 apho lafumana khona ibhaso leTVB laseYurophu eliBalaseleyo lokuBonisa kunye neembasa ezivela kubahlalutyi beshishini.
UKevin ujoyina iqela njengoMongameli weNtengiso yaseMelika. Uyingcali kwimidiya yedijithali nakwiimarike ezisakhulayo kwaye uzisa ngaphezulu kweminyaka esibhozo yamava kwindawo ephambili yokuhambisa umxholo eMelika, ngaphambili ekhokele umsebenzi wezorhwebo kumboneleli omkhulu weCDN Limelight Networks.
U-Anette ngomnye wabacebisi abakhokelayo kushishino lweefowuni kunye neendaba eYurophu kwaye waseka i-BIG Picture, ebonelele ngohlalutyo lwamashishini kunye nophando ukusukela ngo-2009. Ngaphambili wayekhokela ishishini likamabonakude iDeutsche Telekom, elalihamba kumazwe ali-13 lize liqhayise ngababhalisi abayi-5m.
UHanno uqhayisa ngobutyebi bamava kubuchwephesha kunye namagama amakhulu ekusasazeni eYurophu nase-US, kubandakanya iProSiebenSat.1 Media eJamani, kunye ne-DIVV kunye ne-20th I-Century Fox Film Corp. e-US. Okwangoku unguMongameli, uLwabiwo lweZiko leMithombo yeendaba kwiPlanethi ebukhoma, okhokelayo kwinkqubo elandelayo yevidiyo.
"Ndichulumancile ukwamkela uKevin, uAnette noHanno kwiqela leVionlabs kwaye amava adibeneyo azisa into enkulu kwinkampani," utsho. UMarcus Bergström, CEO, Vionlabs. “Ndichulumancile kukuba bakhethe iVionlabs kwaye oku kububungqina bokuba isiQulatho sokuFumanisa isiQulatho sinika utshintsho olwenziweyo kweli candelo kwaye sinikezela ngamathuba amatsha entengiso.”
“IVionlabs inyanzelisa imida enokubakho ekufumanekeni komxholo. Iqonga layo lisombulula umba ophazamise ababukeli kangangeminyaka kwaye izibonelelo ezinikwa abaqhubi kulo lonke elaseMelika zicacile, ”utsho UKevin Odden, uMongameli weNtengiso yaseMelika, iiVionlabs. Ndichukunyiswe ngendlela emangalisayo bubunzulu nolwazi lweqela kwaye ndiyavuya ukunikwa uxanduva lokukhokela umsebenzi wabo eMelika. ”
“Ndichulumancile kakhulu ngeqonga leVionlabs,” utsho UAnette Schaefer, uMcebisi oMkhulu, iiVionlabs. "Emva kokulandela ukukhula kweminikelo yeTV kumzi-mveliso weefowuni eYurophu ngaphezulu kweshumi leminyaka, ixesha lilungile lokufumana umxholo ophuculweyo."
“Sibone iminyaka yegolide yomxholo kule minyaka imbalwa idlulileyo kwaye ngoku singena kwiminyaka yokufunyanwa komxholo,” utsho IHanno Basse, uMcebisi oMkhulu, iiVionlabs. "IVionlabs ibonelela ngeyona nto iphambili kwiminwe yeqonga ezikhoyo namhlanje."
I-Vionlabs yasungulwa ukusombulula umba ababukeli bevidiyo be-intanethi bechitha i-25% okanye ngaphezulu ixesha lesikrini bekhangela into abafuna ukuyibukela. Ikwenza oku ngokuphuhliswa kwe-AI enobuchule obumangalisayo, edibanisa uhlalutyo lomxholo olunzulu olwahlukeneyo kunye nembali yabathengi ukubukela imbali yeqonga eliphambili lokufumana umxholo. Eli qonga lenzelwe umabonakude osemgceni, ukubamba-up, ukusasaza, yonke incasa yeVoD kwaye yenziwa ifumaneke kubaqhubi bevidiyo ngokusebenzisa imodeli esekwe ye-SaaS. Ukufumana ngakumbi malunga nendlela i-Vionlabs ekuguqula ngayo ukufunyanwa komxholo, nceda undwendwele: www.vionlabs.com
Igalelo UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli TVU Networks I-Ultra HD Forum Injini yeVidiyo 2019-10-07
Previous: IVideudio / Umhleli weVidiyo
next: Amandla ePixel akongeza isisombululo kwisoftware